ယူနိုက်တတ်အသင်းထံ အကြံပေးမှုရေးသားတဲ့ UFCဖိုက်တာ မက်ဂရီဂေါ် – Sport Gaber
ယူနိုက်တတ်အသင်းထံ အကြံပေးမှုရေးသားတဲ့ UFCဖိုက်တာ မက်ဂရီဂေါ်
October 27, 2021 October 27, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
မန်ယူအသင်းရဲ့ ပရိတ်သတ်အကြီးစားဖြစ်တဲ့ UFCဖိုက်တာ မက်ဂရီဂေါ်ကတော့ မန်ယူအသင်းအတွက် အကြံပေးစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးကို ၅ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ အနာဂတ်ဟာ မတည်မြဲတော့သလို ကစားသမားတွေနဲ့ နည်းပြကြားက ဆက်ဆံရေးဟာလည်း ကွဲအက်လာပြီလို့ သိရပါတယ်။
လာမယ့် ပွဲတွေကလည်း စပါး၊အတ္တလန်တာနဲ့ မန်စီးတီးတို့လို အသင်းကောင်းတွေနဲ့ တွေ့ရမှာဖြစ်တာကြောင့် မန်ယူအသင်းအတွက် ပွဲကျပ်ကာလတစ်ခုကို ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးလ်ရှားဟာ နည်းပြအဖွဲ့ရဲ့ ထောက်ခံမှုကို အမြဲရရှိခဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် လီဗာပူးကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် ဆိုးလ်ရှားရဲ့ အနာဂတ်အတွက် မန်ယူဘုတ်အဖွဲ့အတွင်းမှာ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန်နဲ့ ရော်နယ်ဒိုတို့လို အသင်းရဲ့ ပုံရိပ်လို ဖြစ်နေတဲ့ ဂန္ဓဝင်တစ်ချို့က ဆိုးလ်ရှားကို ကာကွယ်ပေးခဲ့တာကြောင့် စပါးနဲ့ပွဲမှာ ဆိုးလ်ရှားကို ဆက်လက်မြင်တွေ့ရဦးမှာဖြစ်ပြီးညအတ္တလန်တာနဲ့ မန်စီးတီးတို့ပွဲအထိ ဆိုးလ်ရှားကို အခွင့်အရေးပေးဦးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
တွ်စ်တာပေါ်မှာ မက်ဂရီဂေါ်က “ယူနိုက်တက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေ၊ အတွေ့အကြုံနုတဲ့သူတွေက စကားတွေ အများကြီး ပြောနေတာပါပဲ”
“သူတို့ အားလုံးရဲ့ အပေါ်မှာ တစ်ယောက်ရှိနေဖို့ လိုအပ်တာပါ။ ရော်နယ်ဒို ကစားနေတဲ့အချိန်ဆို ဆိုးလ်ရှားက နည်းပြခုံတန်းမှာ ရှိနေတာပဲလေ”
“ရွယ်တူတစ်ယောက်လောက်နဲ့တော့ ဒီကစားသမားတွေကို ထိန်းဖို့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဆိုးလ်ရှားကို ချစ်ခင်လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုများပြားလာအောင် စီစဥ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ ကျွန်တော့်အမြင်ပါ” လို့ ရေးသားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပြဆိုးလ်ရှားရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေကို ခဗျတို့ မြင်ကြည့်ခဲ့ရဲ့လား…?
Previous Article နည်းပြဆိုးလ်ရှားရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေကို ခဗျတို့ မြင်ကြည့်ခဲ့ရဲ့လား…?
Next Article မန္တလေးတွင် ကမ္ဘောဇဘဏ် ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွါး